राहत लिएर गए खिर्कीका अग्नीपिडित | Indrenionline.com
Home समाचार राहत लिएर गए खिर्कीका अग्नीपिडित
राहत लिएर गए खिर्कीका अग्नीपिडित
२०७३ बैशाख १५ गते बुधबार ०२:४९ बजे
आगलागीका कारण घरवास जलेर नष्ट भएपनि अहिले सम्म राहत नपुगेपछि राहतको खोजिमा लमही आएका राजपुर ९ छेक्रियानाका वासिहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ । करिव ५ घण्टा पैडल हिडेर राहतको खोजिमा आएका उनिहरु हिजो सोमवार लमही आईपुगेका थिए ।
गत बैशाख ९ गते डम्वर वहादुर खड्काको घरमा सोलार सर्त भएर आगो लाग्दा चार घर जलेर नष्ट भएपनि अहिले सम्म राहत नपुगे पछि राहतको खोजिमा यहाँ सम्म आएको उनिहरले पिडित शालिकराम वि.क.ले वताउनुभयो । अहिले खुल्ला आकाशमा वास गरिरहेका पिडितहरुलाई जिल्ला दैवि प्रकोपले प्रदान गरेको रु. पाँच हजार र जि.वि.स.ले प्रदान गरेको रु.एक हजार गरि जम्मा रु. छ हजार रुपैया प्रतिघरको दरले गा.वि.स. सचिव तुल्सिराम खड्काले प्रदान गर्नुभयो ।
त्यस्तै रेडक्रस गढवाले प्रति घर एक एक वटा ट्रिपाल र भान्साका सामान उपलव्ध गराएको छ भने नेपाली कांग्रस क्षेत्र नं. १ ले पनि रु.दुई हजार पाँच रुपैयाको दरले राहत प्रदान गरेको नेपाली कांग्रस क्षेत्र नं. १ सभापति भेषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
राहतले तत्काल केहि राहत भएपनि वर्षात आउदै गरेकोले कुनै संघ संस्थाले टिन उपलव्ध गरिदिए ढुक्क हुने पिडित डम्वर वहादुर खड्काले वताउनु भयो । राहत लिएर पिडितहरु आजै नाका तिर फर्केका छन् । यस वर्ष नाकाको तिन स्थान खंग्रानाका, छेक्रीयानाका र खिर्कीनाकामा आगलागी भएको थियो । तर खिर्कीनाका वाहेक अन्य नाकामा कुनै संघ संस्था पुग्न सकेको छैन ।
विदेश वाट पनि सहयोग
यसै विच रोजगारीका लाग कतार पुग्नुभएका राजपुर ९ मनौरा निवमसी पुर्ण वहादुर रोकाले खिर्कीनाकाका अग्नी पिडितलाई रु. छ हजार प्रदान गर्नुभएको छ । सामाजिक संजाल र अनलाईन पत्रिका मा समाचार देखे पछि छिमेकी वस्तीमा परेको पिडामा मल्हम लगाउन सानो सहयो गरेको रोकालाई उद्रित गर्दै भैसाही निवासी अमृत खड्काले वताउनु भयो ।।
Previous articleपुर्पक्षका लागी कारागार चलान
Next articleडढेलो नियन्त्रणमा लिने क्रममा २ को मृत्यु